Sida ay u shaqeeyaan kooxda design AutoDesk - Geofumadas
Sidee Kooxda Autodesk Design Team
AutoDesk waxay haysaa Barnaamijka Isticmaalayaasha ee Wadashaqeysan, kuwaas oo magacooda ku qoran yihiin Ingiriisi CIP, iyo sida uu sheegay Shaan Hurley, waa habka loo awoodo inuu soo jeediyo fikrado cusub.
Jaantuska waa caanaha, si loo sharaxo sida ay u shaqeyso halkan waxaan ku siinayaa tusaale:
Qofka isticmaala Madagascar wuxuu iibiyaa Xafiiska 2007 wuxuuna yiri:
-Hey! Maxaa dhacaya haddii ay u egtahay AutoCAD.- Sidaas soo dir codsiga
kooxda design helo, barashada jeedinta muddo dheer saddex daqiiqo. khabiir Suuq sheegay in fikradda ah waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan, ka dhigay design ka fikradeed iyo qiil shuruudaha farsamo ka dibna u soo dir deegaanka horumarinta ... Dhanka kale khabiir suuq oo la kulmay kooxda la qabsato faylalka tacliimeed.
Goobta horumarinta ayaa jebisa madaxeeda bilaha waxayna ugu dambayn u dirtaa Naqshadeynta.
- Ilaahow, wuxuu u eg yahay samada.
Waxaa diyaar u ah betechers, oo ka jawaabaya midnimada:
-Waa sidee ## $% oo ahaa fikradda?
Waxaa dhici karta in kaftan la qaado, laakiin waxaan u maleynayaa in ay tahay inay adag tahay naqshadeeyaha software si uu u gaaro go'aamo halka mabaadiida suuqgeyntu ay ka badanyihiin jacaylka barnaamijka. Qaar ka mid ah, in qorraxda ay maanta nagu soo iftiimayso, lama yaabineyno Ribbon of AutoCAD 2009, gaar ahaan sababtoo ah waxay sameyneysaa sanadaha 15 marka yimid AutoCAD R13 Qaar badan ayaa ku dhuftey qeylada sababta oo ah hada taliyayaashu waxay leeyihiin calaamado.
Sanado 15, qofna ma xusuusan doono dhibaatada ... Waxaan ku fakarayaa in dad badani ay xitaa ku jiri karaan jamac ah oo daryeelaya dhaleenka.
Post Previous«Previous Saamaynta safarka uu ku tagayo Bolivia
Post Next Maxay kula tahay adeegyada Bentley iyo WMS?Next »